Koox hubeysan oo xalay Muqdisho ku dilay gabar ka shaqeyneysay Isbitaal Jaamacad leedahay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dabley hubeysan ayaa xalay gabar dhallinyaro ah kala baxay guirgooda oo ku yaallada xaafadda Cocacola ee degmada Yaakhshiid ee magaalada Muqdisho, sidaas waxaa laga soo xigtay dadka deegaanka.
Gabadha la dilay ayaa magaceeda lagu sheegay Nafiso Cusmaan, waxaana la sheegay iney dhawaan ka qalinjibesay mid ka mid ah Jaamacadaha Muqdisho.
Goobjooge magaciisa qariyey oo la hadlay KNN ayaa sheegay in kooxda hubeysan ay gabadha gurigeeda kala baxeen guriga kadibna ku dileen wadada marta Carafaat ee aada qabuuraha Barakaat.
Wuxuu sheegay goobjoogahaan in gabadhu dhawaan ka baxday Jaamacadda Soomaaliya, islamarkaana ka shaqeyneysay Isbitaal ay leedahay Jaamacadda.
Goobjoogahaayaan ayaa sheegay in raga dilka geystay oo gaarayey ilaa 6 ay kala ceyriyeen dadka xaafadda, kadibna gabadha oo ay magaceeda heysteen guriga kala baxeen, isagoo xusay inuusan goobta ka dhaweyn ciidan ay arrinta ku wargeliyaan.
Arrintaan ayaa naxdin weyn ku abuurtay dadka deegaanka, kuwaasoo saaka aasaya meydka gabadha la dilay, mana aha markii ugu horreysay ee deegaankas lagu dilo haween, waxaana halkaas horay waqtiyo kala duwan loogu dilay ilaa 4 haween ah.
Kenyan, Somali leaders vow to defeat Shabaab